Indlela yokukhuthaza iimveliso kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 20, 2018 0 IiCententarios 863
I-Instagram iguquke kakhulu ukusuka ekubeni yindawo elula yokwabelana ngeefoto kwi-intanethi esebenzayo yokuthengisa okuphakathi. Akunabaninzi abantu abazi ukuba ukuthatha inxaxheba kweqonga kukhulu kuneendawo eziphambili zonxibelelwano. Ukuthatha inxaxheba kwi-Instagram ngamaxesha e-15 ngaphezulu kune Facebook, ITwitter kunye neGoogle +. Ngesi sizathu, ukukhuthaza iimveliso kwi-Instagram kunokuba yingenelo kakhulu.
Into enomdla kukuba, i-13 yepesenti yabasebenzisi be-Intanethi basebenzisa i-Instagram, ngelixa ngaphezulu kwesiqingatha seempawu ze-100 ezibaluleke kakhulu bezisekise ubukho babo kwindawo. Abanini bamashishini amancinci nabo kufuneka basebenzise eli qonga ukukhuthaza iimveliso zabo.
Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo zokwenza.
Sebenzisa iiHashtag ezifanelekileyo
IiHashtag zivumela abantu ukuba bafumane wena kunye neemveliso zakho kwi-Instagram. Qiniseka ukuba usebenzisa ii-hashtag ezichanekileyo rhoqo xa uthumela uhlaziyo ukufikelela kubantu abaninzi abanokuba nomdla kwizinto ozithengisayo.
Ukongeza ekusebenziseni ii-hashtag kwigama lenkampani yakho kunye neemveliso, ingayinto elungileyo ukubandakanya ezo zikhangelwa rhoqo kwaye zisetyenziswa eqongeni. Unokusebenzisa izixhobo zasimahla kwi-Intanethi ezifana ne-Iconsquare kunye neWebsta ukuze ufumane ii-hashtag ezidumileyo ngokusekelwe kumagama aphambili akho owathandayo. Sebenzisa kumabali e-Instagram.
Sebenzisa amacebo rhoqo
Kulungile Thumela iifoto rhoqo kwi-Instagramkodwa yazi loo nto Ngokusebenzisa amacebo okucoca indawo, unokutsala umdla wakho ngakumbi kwimifanekiso yakho. Uphononongo olupapashwe yiTrackMaven lubonise ukuba iifoto ngesihluzi seMayfair, akukho sihluzo, kunye nefilitha ye-Inkwell ifumene ukuthanda kunye nezimvo kule ndawo. Le yindlela elungileyo yokukhuthaza iimveliso kwi-Instagram.
Ukuba awuqhelanga nokusebenzisa iifilitha, unokuzama iintlobo ezahlukeneyo kuqala kwaye ufumanise ukuba yintoni ethandwa ngabaphulaphuli bakho ekujongeni usebenzisa isixhobo solawulo se-Instagram.
Thumela awona maxesha amnandi
Xa uthumela kwi-Instagram, kuya kufuneka ukwenze oko ngamaxesha apho imakethi yakho ekuthengiswa ngayo isebenzisa iqonga. Unokusebenzisa isixhobo sokukunceda ngale nto. IconoSquare izisa ingxelo yokwenza ukuba ifuna i elona xesha lilungileyo lokuthumela uhlaziyo ngokusekwe kunxibelelwano lwakho lwangaphambili kunye noluntu lwakho.
Nje ukuba ubone amaxesha afanelekileyo, qiniseka ukuba uthumela uhlaziyo lwakho ngelo xesha ukutsala utyelelo, ukuthandwa kunye nezimvo. Le yenye yamanqaku aphambili okukhuthaza iimveliso kwi-Instagram.
Siyakunceda buyisela ipaswedi yakho kwi-Instagram.
Nxibelelana nabanye abalandeli
Ngelixa uneseti yakho yabalandeli, ayizukukhathaza xa unxibelelana nabalandeli abakhuphisana nabo. Ngokwenza njalo, unethuba lokwandisa abalandeli bakho kunye nezikhokelo.
Kwakhona, kukho isixhobo esinokukunceda wenze oku. Isixhobo seJustUnfollow sinokukhangela abakhuphiswano bakho kwi-Instagram ngamagama abo kwaye sikunike uluhlu lwabo balandeli. Ungabalandela kwaye unxibelelane nabo, umzekelo, ngokunika ingxelo kwiifoto zabo.
Ngesi sizathu, abanini bamashishini abathengisa iimveliso baya kuxhamla kakhulu ukuba bongeza kwi-Instagram kuluhlu lwabo bathengiswa kwi-intanethi. Ukongeza uninzi bayakhuthazwa ukuba Thenga abalandeli be-Instagram Ukutsala ngakumbi ukugcwala kwabantu.
Sikwaxelele nokuba ungakwenza njani phinda ubhale ibali kwi-Instagram.
1 Sebenzisa iiHashtag ezifanelekileyo
2 Sebenzisa amacebo rhoqo
3 Thumela awona maxesha amnandi
4 Nxibelelana nabanye abalandeli
Kutheni le nto iiarhente zemodeli kwi-Instagram zisebenzisa le nethiwekhi?